Ciidamada Puntland ee ku sugan Tukeraq oo mushaar la’aan ka cabanaya & Gaas oo dagaal siyaasadeed... - Caasimada Online
Home Warar Ciidamada Puntland ee ku sugan Tukeraq oo mushaar la’aan ka cabanaya &...
Ciidamada Puntland ee ku sugan Tukeraq oo mushaar la’aan ka cabanaya & Gaas oo dagaal siyaasadeed…
Garoowe (Caasimadda Online) – Wararka laga helayo Gobalka Sool ayaa sheegaya in Ciidamada Puntland ee ku sugnaa deegaanka Tukeraq ay saakay ka baxeen deegaankaasi, kadib markii Mushaar la’aan ay soo wajahday.
Qaar ka mid ah Ciidamada ayaa sheegay inay ka cabanayaan mushahar la’aan muddo saddex bilood ah sida ay sheegeen.
Madaxda Maamulka Puntland ayaa waxaa ay ka codsadeen in wax laga qabto cabashadooda, iyadoona xalinta arintan ay ku howlan yihiin Saraakiisha Puntland.
Saraakiisha arintan ku howlan ayaa waxaa ka mid ah Taliyaha cusub ee ciidanka Daraawiishta Maamulka Puntland Cabdi shukri Cabdullahi Xuseen iyo Saraakiil kale, iyagoona ciidamada ka dhaadhicinayaan in ay dib ugu laabtaan difaacooda.
Subaxnimadii hore ee saaka ayay aheyd markii ciidamadan ay ka soo baxeen jiidaha hore dagaalka ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay mudooyinkii ugu dambeeyey ay joogeen.
Puntland ayaa la sheegayaa in dhaqaalo badan ay ku bixiso ciidamada ku sugan Deegaanka Tukeraq ee Gobalka Sool.